चन्द्र ढकालसँग मभन्दा बढि पैसा छ, तर मसँग अनुभव बढि छ : किशोर प्रधान (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
चन्द्र ढकालसँग मभन्दा बढि पैसा छ, तर मसँग अनुभव बढि छ : किशोर प्रधान (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ७ चैत्र । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आउने साधारणसभामा बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्धवार किशोर कुमार प्रधानले महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेद्धवार चन्द्र प्रसाद ढकालसँग आफूसँगभन्दा बढि पैसा भएपनि अनुभव भने कम रहेको बताएका छन् । उद्योग, धन्दा र व्यापार व्यवसाय चलाउने मामिलामा आफूभन्दा ढकाल ठूलो भएपनि अनुभवको आधारमा २० वर्ष पछि रहेको प्रधानको भनाई छ ।
बिहीबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको “जनता जान्न चाहन्छन्” कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानले ढकालमाथि गम्भिर आरोपसमेत लगाएका छन् । ग्लोबल बैंकका शाखा प्रमुखहरुलाई प्रयोग गरेर गलत काम गरिरहेको समेत उनले बताए ।उनले भने,”मसँग प्रमाण छ, समय आएपछि म त्यो कुरा बताउँला ।” कालोबजारी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । यदि कोही कसै व्यापारी तथा व्यवसायीले कालोबजारी गरे सरकारले पाता कस्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले यो पटक सत्य र असत्यबीचको लडाई हुने बताए । उनले थपे,”उहाँहरु कौरवको फौज लिएर हिँड्नुभएको छ । हामी पाण्डवको फौज लिएर हिँडेका छौं । रामायण पढ्नुभएको होला, कौरवको के गति भयो भनेर ? उहाँले कौरवको फौज देखाउन खोज्नुभएको छ, तर हामी पाण्डवको फौज भनेको शक्तिको फौज हो । चाहे त्यो सानो होस या ठूलो होस् । मलाई सबैको साथ र समर्थन । भवानी राणाको समर्थन छ । उहाँसँग मैले उपाध्यक्ष भएर काम गरेको छु । शेखर गोल्छाजीको समर्थन छ । पूर्व अध्यक्षहरुको समर्थन छ ।”
काठमाडौं, ६ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरुको सामना गर्न संयुक्त
काठमाडौं, ६ असोज । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठक यस्तो बखत बस्यो जतिबेला सत्तारुढ
रामनारायण विडारीको प्रश्न : म भन्दा योग्य व्यक्ति को ?
काठमाडौं, ६ असोज । राष्टियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले आफू राष्ट्रिय सभाको लागि योग्य व्यक्ति रहेको
नेकपा सचिवालय बैठक, मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको मापदण्डबारे छलफल हुने
काठमाडौं, ६ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बस्दैछ ।